Fonosana ho fanohanana ny fampandrosoana ny lozisialy amin'ny DEBIAN 10 | Avy amin'ny Linux
Ity lahatsoratra ity no tohiny (tapany fahatelo) an'ny Tutorials natokana ho an'ny DEBIAN GNU / Linux Distro, kinova 10 (Buster), izay ampiasaina ho toy ny fototry ny maro hafa toa MX-Linux 19 (Duckling mahatsiravina).
Amin'ity fizarana fahatelo ity dia hasehontsika ny fonosana tena ilaina (fampiharana) nanolorana azy ho hanome izay ilaina fanohanana fototra ho an'ny fampandrosoana, fanandramana ary fanatanterahana ny sasany rindrambaiko (fampiharana) momba ny Distros tsara tarehy sy tsara DEBIAN 10 sy MX-Linux 19.
Manavao sy manatsara ny MX-Linux 19.0 sy ny DEBIAN 10.2 aorian'ny fametrahana
Ireo lahatsoratra 2 teo aloha tamin'ity andiany ity dia:
Manavao sy manatsara ny MX-Linux 19.0 sy ny DEBIAN 10.2 aorian'ny fametrahana (Jereo ny fidirana)
DEBIANINA 10: fonosana fanampiny inona avy no ilaina aorian'ny fametrahana azy? (Jereo ny fidirana)
Tsarovy ary tadidio fa:
"Aza adino fa ny hetsika sy fonosana atolotra anao eto dia hihazakazaka sy hametraka dia izay ihany, "fonosana soso-kevitra", ary miankina amin'ny tsirairay ny mihazakazaka sy mametraka azy rehetra na ny sasany amin'izy ireo, maninona izy ireo ilaina na ilaina, amin'ny fotoana fohy na antonony, hahafantarana sy hampiasana azy ireo, amin'ny alalàn'izy ireo mihazakazaka na mametraka azy ireo.
Ary tadidio fa ireo fihetsika sy / na fonosana ireo dia nosedraina teo aloha tamin'ny Distro roa, ary aza mangataka ny hamongotra ireo fonosana napetraka aorin'ireto. Lavitra, tsy mampiakatra ny fihinanana fahatsiarovana na CPU izy ireo satria, tsy mavesatra azy ireo ny dingana na ny daemon (serivisy) ho fahatsiarovana azy ireo. Raha te hahalala mialoha izay ampiasaina amin'ny fonosana tsirairay dia kitiho eto."
1 Fonosana ho fanohanana ny fampandrosoana ny lozisialy
1.1 Fanohanana ny rindranasa Java
1.2 Fanohanana ho an'ny rindranasa QT5
1.3 Fanohanana ho an'ny fampiharana Digital Mining
1.4 Fanohanana ny fampiharana an-tranonkala
Fonosana ho fanohanana ny fampandrosoana ny lozisialy
Fanohanana ny rindranasa Java
tanjony: Mametraha fanohanana ifotony mba hifanaraka amin'ireo rindranasa Java.
Fanohanana ho an'ny rindranasa QT5
tanjony: Mametraha fanohanana ifotony ho an'ny mifanentana amin'ireo rindranasa natsangana niaraka tamin'ny QT5.
Fanohanana ho an'ny fampiharana Digital Mining
tanjony: Mametraha ny fanohanana ifotony an'ny rindranasa, mpamily ary famakiam-boky ilaina amin'ny fametrahana sy fitantanana ny fampiharana Digital Mining.
tanjony: Ampidiro ny tohana famakiam-boky ho an'ny programa izay mampiasa ny tranomboky tahiry Berkeley v5.3, be mpampiasa amin'ny fampiharana Digital Mining ankehitriny hamboarina sy / na hazakazaka.
Fanohanana ny fampiharana an-tranonkala
tanjony: Mametraha fanohanana ifotony ho an'ny rindranasa tranonkala nohavaozina na mifanaraka amin'ny Apache2.
tanjony: Mametraha fanohanana ifotony ho an'ny rindranasa tranonkala nohavaozina na mifanaraka amin'ny Nginx.
tanjony: Ampidiro ny fanohanana baiko sy fiasa fototra amin'ny fitantanana ireo angona mifototra amin'ny Postgresql.
tanjony: Ampidiro ny fanohanana ny fampiharana fototra ho an'ny fitantanana angon-drakitra mifototra amin'ny Postgresql.
tanjony: Ampidiro ny fanohanana baiko sy fiasa fototra amin'ny fitantanana ireo data-data miorina amin'ny MySQL.
tanjony: Ampidiro ny fanohanana ny fampiharana fototra ho an'ny fitantanana ireo angon-drakitra miorina amin'ny MySQL.
tanjony: Mametraha ny baiko fototra sy ny fanampiana ny fitantanana ny Databases miorina amin'ny MariaDB.
tanjony: Mametraha fanohanan'ny baiko sy fiasa ho an'ny fikirakirana ireo fampiharana miorina amin'ny PHP.
tanjony: Ampidiro ny fanohanana ifotony an'ireo tranomboky eo an-toerana amin'ny fitantanana ireo fampiharana miorina amin'ny PHP.
tanjony: Ampidiro ny tohana fototra famakiam-boky tsy miankina amin'ny fitantanana ireo fampiharana miorina amin'ny PHP.
tanjony: Mametraka ny baiko fototra sy ny fanohanana ny andraikitra amin'ny fikirakirana ny fampiharana miorina amin'ny PERL.
tanjony: Ampidiro ny tohana fototra famakiam-boky amin'ny fikirakirana ireo fampiharana miorina amin'ny PERL.
tanjony: Mametraka ny baiko fototra sy ny fanohanana ny andraikitra amin'ny fitantanana ireo fampiharana miorina amin'ny Python.
tanjony: Mametraka ny baiko fototra sy ny fanohanana ny andraikitra amin'ny fikirakirana ny fampiharana miorina amin'ny Python3.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny fonosana tena ilaina ilaina mba hanomezana fanampiana ilaina amin'ny fanitsiana «instalación y gestión» ny fivoaran'ny rindrambaiko sasany, momba an'i Distros «DEBIAN y MX-Linux», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahafinaritra sy goavambe ary mihamitombo ny fampiharana sy ny «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Fonosana ho fanohanana ny fampandrosoana ny lozisialy amin'ny DEBIAN 10
Twikzer dia hoy izy:
Ahitsio aho raha diso aho, fa .. amin'ny debian, tsy nesorin'izy ireo ny phpmyadmin tao amin'ireo trano fitahirizana?
ary raha te hametraka php dia tsy mila mamaritra (ohatra) php7.3 na php7.3-curl ianao
Mamaly an'i Twikzer
Miarahaba anao Twikzer! Misaotra tamin'ny hevitrao. Mazava ho azy fa ny phpmyadmin dia tsy ao amin'ny repositories DEBIAN 10 (Stable) fa ao amin'ny DEBIAN 11 (Testing) Repositories avy amin'izay eritreretiko, fa amin'ny fotoana iray dia hampiditra azy ireo toy ny fonosana hafa ao amin'ny tranon'omby izy ireo, saingy azonao atao na azonao esorina izany, tsy misy Na izany aza, izany no namelako azy teo. Momba ny faharoa dia tsy ilaina izany, satria ny kinova ankehitriny ao anatin'ny trano fitehirizana dia nantsoina tamin'ny anarana nomeny.
Linux Lite 4.8, efa misy ny solon'ny Windows 7